Kachin State – democracy for burma
#BURMA #Hpakan #hundreds #killed in #landslides
21.11.2015 3:30 pm
Hpakan hundreds of people were killed in landslides …..
photocr. Zaw Moe Htet
The fighting continued into the afternoon, and heavy artillery is still being fired. The KIA ordered its forces to retreat to prevent the villagers from being harmed, said Major Daung San yesterday. Continue reading “#ALERT #MYANMAR #BURMA #KIA #FIGHTING #200 #students #21 teachers #700 #villagers #trapped in #between #shooting” →
On December 11, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
#UPDATE #24/11 #MYANMAR #GOVERNMENT #ARTILLERY #KILLED #23 #KIA #CADETS #LAIZA – #WARNING #GRAPHICS
On November 19, 2014 November 24, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
These young cadets from the Arakan Army fell alongside 15 comrades from other ethnic armies as the Burmy Army attacked the Kachin Independence Army’s Military Academy on 19.11.2014.photos: ရက္ခိုင့်တပ်မတော် – သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာန
Initial reports indicated that 22 had died in the attack howevera23rd trainee died of his injuries en route to hospital, the Kachin News Group has learned. The remaining 15 survivors are being cared for in Laiza.
Continue reading “#UPDATE #24/11 #MYANMAR #GOVERNMENT #ARTILLERY #KILLED #23 #KIA #CADETS #LAIZA – #WARNING #GRAPHICS” →
On November 19, 2014 November 25, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
နိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက်နေ့ တအာင်းတပ်မတော်နှင့် မြန်မာ့တပ်မတော်တို့ တစ်ရက်အတွင်း တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ် ဖြစ်ပွါး Continue reading “#update #25/11 #STATEMENTS #ဒီကနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းက ကေအိုင်အေ #ကချင်လွတ်လပ်ရေး #တပ်မတော်ဌာနချုပ်ရှိရာ…” →
#Burma #MYANMAR #Army #attacks #villages in #Kachin #State
On April 16, 2014 April 16, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
ယမန်နေ့ ကဖြစ်ပွားခဲ့သော ကချင်-ရှမ်းမြောက် -တရုတ် နယ်စပ် တိုက်ပွဲအတွင်း လူနေရပ်ကွက်အတွင်း နှင့် ကျေးရွာပါတ်ဝန်းကျင်သို့ ကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့သော မြန်မာအစိုးရတပ်၏ လက်နက်ကြီးကျည်ဆံ အပိုင်းအစ အချို့ 
Burma Army attacks villages in Kachin State , Several mortar shells landed near the Villages
Mang-Win Gyi IDP Camp ( မန်ဝိန်းကြီး စစ်ဘေးရှောင် စခန်း )
KIA, တပ်စခန်းငယ်တစ်ခု ဆုတ်ခွာပေးလိုက်ရ
MADA BUM POST BAI YEN KAU SAI
မိုးမောက် အထက်ဘက် ခ၀မ်ဘမ်ကျေးရွာအနီးရှိ ဒဂေါ်-မဒါဘွမ်
KIA,ပို့ စ်အားယနေ့ နေ့ (15.4.2014)လည်ပိုင်းတွင် ခေတ္တဆုတ်
ယနေ့ မနက်အစောပိုင်းမှ စတင်ကာ အစိုးရတပ်များ တရစပ်ထိုး
စစ်ဆင်သည့်အပြင် ခ၀မ်ဘမ်ကျေးရွာတွင် စခန်းထိုင်နေသော
အစိုးရတပ်မှ လက်နက်ကြီးဖြင့် မရပ်မနားပစ်ကူပေးနေသောကြောင့် ဆုတ်ခွာပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရှေ့ တန်းသတင်းအရသိရသည်။
မြန်မာအစိုးရတပ်များမှ ထိုးစစ်ဆင်ရန် အင်အားထပ်မံဖြည့်တင်းနေပြီး စစ်ဆင်ရေးအရှိန်တိုးမြှင့်သွားရန် စီစဉ်နေကြောင်း ထပ်မံသိရသည်။
On January 7, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment